I-CEO ye-Delta: Izisebenzi zezindiza eziyi-8,000 ezihlolwe zine-COVID-19
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-CEO ye-Delta: Izisebenzi zezindiza eziyi-8,000 ezihlolwe zine-COVID-19
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Health News • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Iqiniso lokuthi cishe u-11% wabasebenzi benkampani yezindiza abahlolwe ukuthi bane-COVID-19 libe nomthelela ekuhoxisweni kwezinkulungwane zezindiza kulo lonke elase-US ngesikhathi samaholide, kusho uBastian.
Engxoxweni ngoLwesine, Delta Air Lines CEO U-Ed Bastian iveze izinombolo zabasebenzi bezindiza abangenwe yigciwane le-COVID-19.
Ngokuvumelana ne I-Bastian, 8,000 kwe Delta Air Lines' Bangu-75,000 abasebenzi asebehlolelwe i-COVID-19 emasontweni amane edlule.
Iqiniso lokuthi cishe u-11% wabasebenzi benkampani yezindiza abahlolwe ukuthi bane-COVID-19 kube nomthelela ekuhoxisweni kwezinkulungwane zezindiza kulo lonke elase-US phakathi nenkathi yamaholide, I-Bastian kusho.
I-CEO iphinde yabikezela ukulahlekelwa kwenkampani yezindiza ngekota yokuqala yonyaka ngenxa yokungabikezeli kwe-COVID-19 kanye nezinhlobo ezintsha ezisakazeka ngokushesha njenge-Omicron.
I-Bastian uthe, nokho, isimo sesiqala ukuzinza, futhi akukho ukungabikho kokugula okuguquke kwaba yinto embi kakhulu.
“Bezingekho izinkinga zempilo ebesizibona kuyona, kodwa ibakhiphe emsebenzini isikhathi esifana nesasinohambo olumatasa kakhulu esike salubona eminyakeni emibili,” kusho yena. Kamuva wengeza ngokuthi u-1% kuphela wezindiza ezikhanselwe inkampani yezindiza kuleli sonto eledlule.
Delta Air Lines bekungenye yezindiza eziningi ezikhansele izindiza ngesikhathi samaholide, njengoba bekuzabalaza ukuthobela imihlahlandlela yezempilo ye-COVID-19.
Ukukhanselwa kwenqwaba okuvela ku-COVID-19 kanye neziphepho ezinamandla zasebusika kubangele ukuthi iDelta ibike ukulahleka kwezigidi ezingama- $ 408 ngekota yokugcina ka-2021.
NgoDisemba, I-Bastian basayine incwadi ecela ukuthi iCenters for Disease Control and Prevention (CDC) ifinyeze izincomo zayo zokuzihlukanisa zisuka ezinsukwini eziyi-10 ziye ezinsukwini ezinhlanu ukusiza ngokushoda kwabasebenzi, okuyisinyathelo esigxekwe yi-Association of Flight Attendants.
Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, isincomo safushaniswa saba yizinsuku ezinhlanu zokuzihlukanisa ngemuva kokuhlolwa ukuthi une-COVID-19, uma i-asymptomatic.
Isikhulu se-United Airlines, uScott Kirby, siphinde samemezela izifo ezingama-3,000 ze-COVID-19 phakathi kwezisebenzi zendiza ezingama-70,000 ekuqaleni kwaleli sonto, nokuphoqe ukuthi kuncishiswe amashejuli enkampani.